नबुको शब्दघर: नजानिँदो तरिकाले अरुका फेसबुक पेज यसरी लाईक हुन्छन् !
नजानिँदो तरिकाले अरुका फेसबुक पेज यसरी लाईक हुन्छन् !
जबरजस्ती लाईक पाउन यसरी थापिन्छ पासो ।
कहिलेकाहीँ नसोचेको कुरा भैदियो भने छक्क परिन्छ ।
हामीमध्ये धेरैजना ठूलो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अभ्यस्त भैसकेका छौं । स्टाटस र फोटो अपलोड गर्ने, लाईक गर्ने, कमेन्ट गर्ने, च्याट गर्ने, पेज बनाउने, सेटिङ्ग परिवर्तन गर्ने लगायत फेसबुकका सबै फिचर हाम्रा लागि सामान्य जस्तै भैसके ।
हामीमध्ये केहीले विभिन्न मोबाईल एप्लिकेशन तथा कम्प्युटर एप्समार्फत पनि फेसबुक कनेक्ट गरेर नविनतम प्रविधिमा रमाईरहेका छौं । विभिन्न सुविधा पाउने लोभमा विभिन्न ईन्टरनेट पेज र एप्लिकेशनमा लग ईन गर्दा जानेर वा नजानेर आवश्यकता नपरेका व्यक्तिलाई पनि पछ्याईएको हुनसक्छ । जबरजस्ती फेसबुक पेज लाईक गर्न थापिएको पासो को एउटा उदाहरण हेर्नुहोस् ।
<<<पत्तो लगाउनु होस् कसले तपाइको फेसबुक प्रोफाइल हेर्ने गर्छन | यहाँ क्लिक गर्नुहोस--->http://timelinevisitor.tqnepal.com/>>>
पछिल्लो केही समययता फेसबुकमा भाईरल बनेर फैलिरहेको यो लिंक तपाईंसामु पनि आईपुगेको हुनसक्छ । अनि आफ्नो प्रोफाईल कुन कुन व्यक्तिले जाँच गरे भनेर जान्नका लागि तपाईले पनि यहाँ भने अनुसार नै गर्नुभएको हुनसक्छ ।
एकपटक यहाँ उल्लेख गरिएका सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि, ईन्टरनेट र यसबारे अलि दक्षता राख्नुभएका साथीहरुले त फेसबुकमा विभिन्न रंगी बिरंगीका नामबाट बग्रेल्ती खुलेका पेजहरुले अपनाएको यो नयाँ हर्कतका बारेमा पक्कै थाहा पाईसक्नुभयो होला ।
तर फेसबुक तथा ईन्टरनेट चलाउने तर यसको प्राविधिक बिषयमा कम जानकारहरुले भने आफ्नो प्रोफाईल कसले कति पटक हेरेछ भनेर थाहा पाउन यो पेजमा भनिए अनुसारको प्रक्रिया अझैपनि दोहोर्याईरहनु भएको हुनसक्छ ।
tqnepal.com नामक वेवसाईटको सब डोमेन timelinevisitor को नामबाट बनाईएको यो पेजमा फेसबुक प्रयोगकर्ताले केही प्रक्रिया पुरा गरेमा आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल कसले कति पटक हेर्छन् भनेर पत्ता लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । पहिलो चरणमा यहाँ राखिएका ६ वटा लाईक र २ वटा फलो बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने बताईएको छ ।
यसको अर्थ यो हो की यहाँ राखिएका सबै ६ वटा लाईक बटनमा तपाईंले क्लिक गर्नुभएमा विभिन्न ६ वटा छुट्टाछुट्टै फेसबुक पेजमा तपाईंले नजानिँदो पाराले लाईक गर्नुभयो । अनि २ व्यक्तिको प्रोफाईललाई तपाईंले नजानिँदो पाराले फलो पनि गर्नुभयो । सबैलाई यी बटन के हुन् थाहा नहुन पनि सक्छ ।
यी सबैमा लाईक र फलो गरेपछि, दोश्रो चरणमा तलपट्टीको बक्समा यसरी लेखिएको छ ।
यसको अर्थ यो हो की यहाँ भनिए अनुसार साथीको प्रोफाईल, कमेन्ट, च्याट, ग्रुप आदी गरेर ५ छुट्टाछुट्टै ठाउँमा यो लिंक पोष्ट गर्नुभएमा तपाईं जस्तै अरुले पनि आफ्नो प्रोफाईल को को ले हेरेछन् भनेर जान्न खोज्छन् । अनि अरुले पनि माथी तपाईंले गर्नुभएको जस्तै प्रक्रिया दोहोर्याउँछन् । यसले गर्दा चरण १ मा राखिएका ६ वटा लाईक बटन र २ वटा फलो बटनका व्यक्तिलाई धेरैले लाईक र फलो गर्न पुग्छन् ।
अब तपाईंले यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि, तेश्रो चरणमा Click Here मा क्लिक गर्नुहुनेछ ।
तर माथी भनिए अनुसारका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि तपाईंले आफ्नो प्रोफाईल कतिले हेरे भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्न । जति नै प्रयास गरेपनि तेश्रो चरणमा प्रवेश गर्दा तपाईंले यस्तो सन्देश पाउनुहुनेछ ।
आफ्नो फेसबुक प्रोफाईल तथा टाईमलाईन कसले कति पटक हेरे भनेर जान्ने उत्सुकता सबै प्रयोगकर्तालाई हुन्छ । फेसबुकले च्याटदेखि भिडियो कल र स्टाटस अपडेटदेखि लाईक, कमेण्ट तथा फोटो र भिडियो अपलोड गर्नेसम्मका धेरै सुविधा दिएको छ । तरपनि फेसबुकले आजका मितिसम्म उसका प्रयोगकर्ताको टाईमलाईन कति जनाले हेरे भनेर जानकारी लिन मिल्ने सुविधा कसैलाई दिएको छैन । फेसबुकको आधिकारिक भनाई हेर्नुहोस् ।
यति पढिसकेपछि तपाईंले पक्कै पनि थाहा पाईसक्नुभयो, फेसबुकमा बढी लाईक पाउन र बेतुकका पेजको लाईक संख्या बढाउन मान्छेले कतिसम्म गर्दो रहेछ ।
धेरैलाई रिस पनि उठ्यो होला झुक्याएर पेज लाईक र प्रोफाईल फलो गराउनेहरु प्रति । नआत्तिनोस्, तपाईंले पहिले नजानिँदो पारामा लाईक र फलो गर्नुभएका ती पेज र प्रोफाईललाई अनलाईक र अनफलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि आफ्नो टाईमलाईनमा गएर View Activity Log मा क्लिक गर्नुहोस् । अनि एक एक गरेर तपाईंले लाईक र फलो गरेका पेज र प्रोफाईललाई हटाउन पनि सक्नुहुन्छ ।
तपाईंले यी दुई व्यक्तिको प्रोफाईलमा फलो गर्नुभएको थियो ।
अनि तपाईंले यी ६ वटा फेसबुक पेजमा पनि लाईक गर्नुभएको थियो ।
Facebook Timeline Analzyer
Study Nepali Online
timelinevisitor को मुख्य वेवपेजको जबरजस्ती लाईक गराउन लगाउने खेती पनि हेर्नुहोस् ।
हुन त फेसबुकको टाईमलाईन र प्रोफाईल भ्यू गर्न सकिने भन्दै गुगलको प्ले स्टोर तथा ईन्टरनेट बजारमा थुप्रै एप्लिकेशनहरु पनि छन् । तर ती कुनै पनि आधिकारिक भने होईनन् । फेसबुकले स्पष्ट रुपमै भनेको छ कुनै पनि टाईमलाईनको कति भ्यू भयो भनेर देखाउन सकिँदैन ।
त्यसैले, आफ्नो प्रोफाईल वा टाईमलाईन कसले कति पटक हेर्यो भन्दापनि फेसबुकमार्फत कसरी गतिला खुराक लिने र अरुलाई के दिने भन्ने कुरा ज्यादै महत्वपूर्ण हो ।
आफूलाई अनुपयोगी लाग्ने तथा मन नपरेको पेज किन लाईक गर्ने ? तर धेरै लाईक देखाएर शान बढाउन खोज्नेहरुले जबरजस्ती लाईक गर्न बाध्य बनाउँछन् । फेसबुकमा डलर तिरेर विज्ञापन गर्नुभन्दा सजिलै धेरै लाईक पाउन सकिन्छ भने उनीहरु यसका लागि कुनै कसुर बाँकी राख्दैनन् । यस्ता लाईकका भोगी र विभिन्न पासोमा फसाएर लाईक गर्न लगाउनेसँग सामान्य ध्यान दिने हो भने पनि बच्न सकिन्छ ।
फोटो र स्टाटस अपडेट गर्नासाथ हामीले धेरै लाईक र कमेण्टको अपेक्षा गर्छौं । फेसबुकमा नयाँ कुरा राख्ने केही भेटिएन भने गनपते र थाङ्ने (झ्याउ लाग्दा) बिषयवस्तु पनि बेला बेलामा कोट्याईरहन्छौं ।
फेसबुक खोल्दैमा स्टाटस अपडेट गरि नै हाल्नुपर्छ भन्ने छैन । अरुले लेखेका र अपडेट गरेका बिषयवस्तु पढेर पनि फेसबुकको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । उनीहरुको विचार राम्रो लागेमा शेयर गरेर सबैसामु पुर्याउन पनि सकिन्छ । चाखलाग्दा, नयाँ, ज्ञानबद्र्धक र आफूले लेखेको कुराले अरुलाई पनि केही फाईदा पुगोस् भन्ने लाग्छ भने मात्रै फेसबुकमा लेख्नु राम्रो हो ।
फेसबुकमा एउटा यस्तो झुण्ड छ जहाँ सबै किसिमका मानिसहरुको सहज प्रवेश छ । तपाईंले याद गर्नुभएकै होला अलि बौद्धिक तथा हाई प्रोफाईलका व्यक्तिले फेसबुक भन्दा बढी ट्विटरको प्रयोग गर्छन् । (यसको अर्थ, उनीहरुले फेसबुकको प्रयोग नै गर्दैनन् भन्ने होईन, हजारौं सेलिब्रेटी तथा कहलिएकाहरुका फेसबुकमा लाखौं, करोडौं फ्यान पनि छन् ।)
हुन त ट्विटर पनि सबैका लागि खुल्ला छ । फेसबुकमा झिनामसिना र गनपते कुरा गर्ने जमात कै कारण अलिक बौद्धिक वर्गका व्यक्तिहरु ट्विटर र अन्य सामाजिक सञ्जालतर्फ चलेको मान्न सकिन्छ । जहाँ उनीहरु आफू समानका व्यक्तिहरुसँग खुलेर बहस गर्ने गर्छन् ।
यो ब्लग तपाईंलाई मनपर्यो भने फेसबुक र ट्विटरमा पनि प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ ।
Posted by News Admin at 7:55 PM
Labels: प्रविधि सञ्जाल